Ma isku dayi laheyd inaad kaga baxsato boorso adiguu ku jira xabsi Video+Sawiro – SBC
Ma isku dayi laheyd inaad kaga baxsato boorso adiguu ku jira xabsi Video+Sawiro
Posted by editor on July 8, 2011 Comments
Dhacdo la yaab leh oo caashaq ku larnaa ayaa ka dhacdey xabsi weyn loo ilaaliyo oo ku yaal wadanka Mexico ka dib markii haweenay ay isku dayday inay ay nin ay saaxiibo ahaayeen xabsiga uga bixiso iyadoo ku jiidaysa boorso ay ku soo dhexridey.
Maria del Mar Arjona oo ah gabar 19 sano jir ayaa xabsiga ku soo booqatey gacaliyaheeda oo lagu magacaabo Juan Ramirez Tijerina kaasi oo ku jirey xabsiga Chetumal ka dib markii xukun 20 sano ah gorada loo galiyey isagoo lagu helay dambi ah in lagu qabtey hub sharci daro ah.
Maria oo ay u muuqatey inaanay gacaliyaheeda ku sugi karin xabsiga 20-ka sano ee ah ee lagu xukumay ayaa talo ku goosatey inay soo qaadato boors isla markaana ay ku soo qariso,. Laakiin taasi ma noqon mid guuleysata oo isku daygaasi boors ku qarinta waa kashifmay.
Ilaalada xabsiga oo u fasaxay Maria del Mar Arjona si ay qolkiisa ugu booqato saaxiibkeeda iyadoo sidata boors ayaa markii ay soo baxdey waxaa laga shakiyey boorsada ay sidato oo aad u cusleyd maadama uu ku jiray qof bini’aadam ah, waxaana lagu armay in la baaro boorsada waxaase yaabku uu ahaa markii lagu dhex arkley Juan Ramirez Tijerina oo boorsada dhex yuurara.
Maria ayaa iyada qudheeda xabsigii ay isku dayey inay saaxiibkeeda kala baxsato lagu xirey, waxaana ay haatan sugaysaa in lagu soo oogo maxkamad.
Gerardo Campos oo ah afhayeenka xabsiga ayaa sheegay in ciidamadu ilaalada xabsiga ay ka shakiyeen boorsada Maria ka dibna ay joojiyeen oo ay baareen ayna ka heleen maxbuus Juan Ramirez Tijerina oo si xeeladeysan boorsada loogu soo dhex qariyey.
Tani ma ahan dhacdadii ugu horeysay ee ka dhacda xabsiyada wadanka Mexico, iyadoo ay badan tahay sheekooyinka qosolka leh ee ka dhaca xabsiyadaasi, sida iyadoo haweenka marka ay ragooda ugu yimaadaan xabsiga ka soo dhiga sida haweeney oo kale iyagoo ugu soo labisa dharka dumarka iyo waliba make up wajiga loo soo mariyo, timo buruko ah iyo kabo cirbo dhaadheer. (Link Video-ga hoose ka daawo sheekadan qosolka leh)
Dhacdo kalena maamulka mid ka mid ah xabsiyada Mexico ayaa ka warhelay club ka dhexfuran xabsigaasi oo aanay ka qasneyn maxaabiista isla markaana isla dhacaya noocyada maandooriyeyaasha sida xashiishada, qamriga & biirka.